Buuhoodle:Dagaal is tuur tuur ah oo la ga soo sheegayo Colaadii Kalshaale | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > ALL DARWIISH NEWS, PUNTLAND, Somaliland, WARARKA	> Buuhoodle:Dagaal is tuur tuur ah oo la ga soo sheegayo Colaadii Kalshaale
Wararka laga helaya deegaano ka tirsan Buuhoodle ayaa sheegaya in saaka dagaal xabada goos goos ah uu ka dhacay,waxaana uu dagaalkani ku soo aaday iyadoo baaqyo iyo wadahadalo la wado sidii ay Ciidamada Somaliland meesha uga bixi lahaayeen,markii taa la maqlayna waxaa saaka la bilaabay rasaasta sidii caadiga ahayd.
Waxaa kaloo soo baxaya warar kale oo sheegaya in kooxo gaar ah aysanba rabinba in meesha wax nabad ahi ay ka dhacdo.
War jiraa cakaaruu iman ,dhibtuna dadka deegaanka ayay ku dhacayso.
Wixii kasoo kordha waa idiin soo gudbinaynaa,dagaalkanna waa mashruuc loogu tala galay in aanay dadka reer hawdku aanay nabad helin,wuxuuna ka socdaa Afar Jiho.
Waxaannu ugu baaqaynaa in Somaliland Ciidamadeeda kala baxdo,markaas ayaa wax kala cadaanayaan.
Haddii ay kala bixi weydo waxaa somaliland ku dhacaysa tii jarmalka ka qabsatay Raashka Dagaalkii Labaad ee adduunka.
Somalia:Dagaalka maanta ka dhacay Muqdisho,Baled Weyne,Baled Xaawo … Beenin iyo Cambaarayn warka ku soo baxay widhwidh online ee Cinwaankiisu yahay “Xaabsade ayaa ka fikirey xeelado cusub oo uu ku soo nooleeyo colaadii Cagaarre”.